Beach Fashion 2017 - Uwe na ejiji, obere na akpa, na chaa chaa, akpụkpọ ụkwụ na ngwa
Ejiji Ejiji 2017 - Ụdị Ọhụrụ, Ụdị Na-aga n'ihu, Ihe Foto Dị Mma
Ụsọ osimiri eji ejiji 2017 bụ mkpụrụ osisi na-atọ ụtọ, ụdị ụcha ndị na-adọrọ adọrọ, ụdị ejiji dị iche iche, ihe ndị na-adọrọ adọrọ, ndị na-acha odo odo, ndị na-ejiji na eriri akpa, ngwa ndị na-egbuke egbuke nke na-emesi onye ọ bụla mma.
Beach Fashion 2017 - ọnọdụ
Ụsọ oké osimiri - okpomọkụ 2017 ga-amasị ndị inyom kachasị oké ọnụ ahịa nke na-asọpụrụ ọnwa ọ bụla iji mejupụta uwe wodrobu ha na mbụ gizmos. Ya mere, ebe a, ha bụ, ihe kachasị n'oge okpomọkụ:
Oké osimiri . Ugboro ejiji New York gosipụtara ọtụtụ ụyọkọ akwụkwọ ntanetị ọ bụghị naanị n'ụsọ mmiri mmiri, kamakwa n'ọdụ ụgbọ mmiri na-acha odo odo, na-agbapụ agbụ, uwe. N'elu ọnụ ọgụgụ nke ewu ewu bụ ihe na-adịghị mma. Nke a gbasara uwe na uwe. Ha nwere ike ịnweta ike dị iche iche, a ga-eji ya gwọọ ya. Na nchịkọta nke Valentino, Banana Republic , Altuzarra, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ụdị ịma mma.
A na- ebute agba khaki ma na-ebute otu ụzọ ahụ na-acha uhie. Ndị na-emepụta Carolina Herrra, J.Crew na ihe ndị ha kere kpebiri igosi na uwe na-ekpuchi khaki nwere ike ịchọta nwanyị na oge okpomọkụ nke mara mma.
Egwuregwu osimiri osimiri 2017 bụ 50 shades nke odo . Kemgbe mmiri ahụ, ihe kwesịrị ịdị na-egbuke egbuke na uwe akwa. Ọ bụ oge ịgbanye ụta gị ka ọ bụrụ ihe anwụ na-acha ma na-amasị anya. Uwe nwere ike ịbụ lemon, gold, mọstad, agba ọka. Na-enwe mmasị na ịma mma a na Delpozo, Onye Nchịkwa, Jason Wu.
Mmadụ ga - ahụ nke a dị iche iche, mana ejiji nke osimiri 2017 juputara na ihe nwere ogologo aka ma n'otu oge ahụ n'ubu aka. CG, Tibi, Hellessy hụrụ ihe dị iche na nke a. Ihe omuma a na-enye ihe oyiyi nke ikpochapu na mmetuta nke mmekorita.
Na-asọpụrụ ihe a na- adịghị ahụkebe ? Gee ntị n'àkwà osimiri ahụ na ịkụda ubu. Ọ bụrụ na ị tụlere nkọwa zuru ezu na-enye echiche na ị na-agbaji aka n'emeghị aka mgbe ị na-eme njem n'ụsọ oké osimiri, ị ghọtaghị otú ekwesiri isi na mkparịta ụka nke ụbụrụ eze sara mbara. A na-ahụ ụdị ụdị mmasị na Tome, Prabal Gurung, Onwe-Portrait.
Egwuregwu Egwuregwu 2017
Egwuregwu ejiji odo odo 2017 - atụmatụ agba agba, ihe atụ nke translucent chiffon, na-enye onyinyo nke ịghọ aghụghọ, owu, na-ekwe ka ahụ na-eku ume ọbụna n'ụbọchị kachasị mma. Obere na uwe mpempe akwụkwọ a, nke ị na-eyi n'ahịrị mmiri n'emeghị ihe ọ bụla. Ọ na-adọrọ mmasị ụmụ agbọghọ nwere ụdị ọnụ ọgụgụ dị iche iche. Ndị na-ede akwụkwọ na-atụ aro ka ha ghara ịtụ egwu ịnwale, iji jikọta uwe akwa na uwe ịsa ahụ nke dị iche iche na agba. Na ụdị nke monotony na variegated usoro. Ọzọkwa, mkpụrụ akwụkwọ nri fatịlaịza na-aga n'ihu na-enweta nkwado.
Uwe Akwa Ugboro 2017
Uwe uwe ejiji ejiji 2017 - okomoko okooko osisi, ihe eji eme ihe na ejiji akwa, uzo nke nwa-dolla ntutu obi, uwe ejiji ejiji, nke obosara azu. Nke a bụ uwe ejiji na-ejikọta ya na ọnyá dị iche iche. Ihe ndị a dị mma ma jiri ntakịrị ala dọrọ ala (usoro a dị mkpa maka ọtụtụ oge). Beach ejiji 2017 - na-acha odo odo, na-acha ọcha ọcha, powdery shades, na-acha anụnụ anụnụ. Nke a bụ akwa akwa akwa ma ọ bụ chọọ ya mma na coquettish peas.
Ebu Ugha efu 2017
Akpa akụ 2017
Uwe mkpuchi mmiri maka ndị inyom 2017 ga-amasị ya na iche iche ya. Maka obi ụtọ zuru oke, echefula ịzụta ụdị dị iche iche nke okpokoro isi nke okpomọkụ, nke ga-adaba na ụdị uwe ọ bụla. N'elu ọnụ ọgụgụ nke ewu ewu:
agba odo (Sonia Rykiel, Anna Sui);
na na na na na na na (Miu Miu, Dolce & Gabbana);
berets, nke ihe eji egwu ma kwado ya na mpempe akwụkwọ , ọnyá dị iche iche (Miu Miu, Dolce & Gabbana);
agba odo n'ememe eji eme ihe n'ememe 2017 - nke a bụ bezel na ákwà mgbochi, nke ụdị ụwa dị ka uwe, ezigbo maka otu oriri (Dries Van Noten, Machael Costello);
akpụkpọ ụkwụ baseball na patchwork style, na-eji akara akpụkpọ anụ na ihe ndị siri ike na-arụ ọrụ (Yụl, Moschino);
agba chaa chaa, na-echetara onye uwe ojii (Vivetta, Yohji Yamamoto);
ụsọ oké osimiri 2017 - nleta, nke ga-abụ impeccable mmecha nke oyiyi (Max Mara, Nicholas K);
Ejiri ihe eji eme ihe dika bandana (Gucci, Giorgio Armani);
Egwuregwu odo odo na-acha odo odo na 2017 na-eme ka ahịhịa na ákwà (Blumarine, Christian Siriano).
Egwuregwu agba chaa chaa 2017
Akwa akpụkpọ ụkwụ 2017
Egwuregwu akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 2017 - bụ otu nke na-enyeghị gị nsogbu ọ bụla mgbe ị na-eje ije. N'elu ejiji-Olympus nọ na-ejide akpụkpọ ụkwụ na-agba chaa chaa nke nwere nkwekọrịta dị egwu, ọhụụ ndị dị mma na eriri a na-akwagharị, nke ị gaghị eche mgbe ị na-akwọ ụgbọala. Nke a bụ ihe na-adọrọ mmasị na-adọrọ mmasị nke ga-eweta ụfọdụ zest na uwe gị n'oge okpomọkụ, akpụkpọ ụkwụ nwere eriri n'etiti mkpịsị aka na mkpịsị aka abụọ nke eco-akpụkpọ anụ, otu nsụgharị osimiri nke mara mma nke na-enweghị ihe ọ bụla na-eme n'ụdị ụgbụ agba. Ndị a bụ akpụkpọ ụkwụ dị ala, ọkpụkpụ ndị e ji nkume chọọ mma, akpụkpọ ụkwụ n'elu ikpo okwu.
Osimiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ 2017
Beach Baa 2017
Osimiri osimiri na-egbuke egbuke 2017 - na-egbukepụ agba, ọtụtụ ihe eji achọ mma. Ndị a bụ nnukwu akpa na obere akpa, akpa azụ na square, njigide dị n'ụdị shei ma ọ bụ obi. E nwere otu ebe na obere akpa aka na otu agbụrụ (Monki). Ọtụtụ ndị ọzọ na-ewu ewu abụghị nanị khaki, nke a kpọtụrụ aha n'elu, kamakwa usoro nzụlite. Beach pụrụ iche ejiji 2017 bụ:
a backpack obere na a yi ifuru ebipụta (adidas Originals);
akpa akpa na-acha ọcha na-egbuke egbuke na mkpụmkpụ akwụkwọ n'ụdị ego ọlaọcha, jeans Shopper na patchwork style (ASOS);
obere akpa mmiri na akpa (Missguided);
obere obere akpa n'ubu ya na eriri eriri ya na nkume a na-agba gburugburu na nnukwu wicker nke nwere pomp pud (Ted Baker).
Mara mma osimiri akpa 2017
Oké osimiri Beach 2017
Egwuregwu eji ejiji eji ejiji 2017 adịghị mkpa ka ọ bụrụ ihe dị iche na agba na ihe eji eme ihe. Otutu uzo di iche iche na nchikota nke oge opupu ihe omumu nke eji eme ihe n'ile ihe omimi nke uwa ka emere na ihe di omimi. Ihe na-emekarị nke oge a bụ nnukwu ọkpọ, na-ele anya ụkwụ. Họrọ linen ma ọ bụ ụdị owu. Ndị a nwere ike ịbụ obere mkpirisi na mmetụta nke washing acid (New Look), denim shorts with the effect of degradation (River Island), ụdị osimiri na-ede akwụkwọ floral (Ọ dịghị onye nwatakịrị) ma ọ bụ nwere ntaneti na brushes (PrettyLittleThing).
Atụmatụ Ụsọ Oké Osimiri Trendy 2017
Ngwa ngwa ngwa 2017
Beach ụta 2017 ga-agbakwunyere na ọla ntị, ọla aka na obere olu. Na egosi nke Alexander McQueen na ụdị niile, e nwere nnukwu ọla ntị nwere ike na-enweghị nchebe maka ụbọchị ịhụnanya. Roberto Cavalli mere ka ọ hụ ọhụụ nke onye ọhụụ nke oge a site na njikọ nnukwu njikọ ndị na-egbuke egbuke. Erdem, Elie Saab, Jeremy Scott na-enye ka ị na-eyi ọla ntị, otu na agba ma ọ bụ ụdị. Ndị na-emepụta ụdị ihe eji eme ihe na-ejikarị ọla ntị na-eme ihe, na-agbatịkwu mma site na pompons (Balmain) na ọla aka ndị dị n'elu nke aka (Ashish).
Mara mma osimiri osimiri 2017
Achịcha nri na 2017
Ụsọ osimiri nke osimiri 2017 kwuru, sị:
Ala na marigold ejiri;
a nabatara isiokwu naval ahụ;
ihe nko osisi;
eserese na mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ;
ọtụtụ monophonic na otu ụzọ marigolds;
ihe ntaneti na-egbuke egbuke;
oyiyi nke nkwụ, ice cream na anyanwụ.
Ọmarịcha mma odo odo 2017
Beach Fashion 2017 maka Full
Utu osimiri eji ejiji 2017 n'ihi na juputara n'omume ndi mara mma, ihe eji eme ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ihe dị mma, ṅaa ntị na:
a sara mbara nke a na-egbutu nke agba agba na eriri na olu akwa;
owu sarafan na akwa ukwu;
uwe na-emeghe n'ubu na ezi mkpụrụ osisi floral;
Romper na akwa khaki waistline;
ihe na-acha odo odo na bodices na bodice;
ejiri ihe ntinye na ntanye na nkwụ;
odo odo anya na obere uwe, nke a na-eji aka ya.
Beach Fashion 2017 n'ihi na - emekarị
Ụsọ ụda mmiri 2017 aghaghị ịgụnye ihe na-egbuke egbuke nke wodrobu ma ọ bụghị naanị banyere agba, kamakwa banyere imewe. N'oge ọkọchị, na-eyikarị uwe ndị sitere na ihe ndị dị na mbara igwe (swimsuit anaghị agụta). Iwu a na-emetụta ihe ejiji, sarafans, rompers, shorts. Mee ka iku ume gị. Na teepu okpomọkụ ọ dị mkpa inwe ike ijikọta ịdị umeala n'obi na ịtọpụ. Enwere ike imezu nke a na ntinye akwa na translucent.
Iji onyinyo ndị na-egbuke egbuke na 2017 wee bụrụ ihe dị mma, na-eyi uwe swimsuit sexy. O nwere ike ịbụ ọ bụghị naanị ihe na-adọrọ adọrọ na-adọrọ adọrọ, kama ọ bụ ịma mma a jupụtara na ya, nke nwere olu dị elu, na-achọ mma na ịkwa akwa. Nye ohere maka obere sarafans nke ịkpụchapụrụ n'efu. Echefula iji wetara gị akwa uwe na osimiri. Ọ ga-abụ ezigbo ejiji maka oriri na ụsọ osimiri.
Uwe akwa maka 2013
Akpụkpọ ụkwụ 2015
Ejiji mara mma - okpomọkụ 2016
Ejiri uwe mwụda 2016
Ugbua windo nwanyi 2016
Haircuts - okpomọkụ 2014
Akpụcha akpụkpọ ụkwụ maka ụmụ nwanyị
Uwe agbamakwụkwọ ndị dị na ejiji na 2015?
Agba uwe ejiji 2014
Egwu na-egbuke egbuke 2016
Agbamakwụkwọ Uwe Mara Mma 2015
Uwe ejiji ejiji - Fall 2016
Kedu ka ị ga-esi kwado otu pearl pel n'egbughị oge?
Kurantil - egosi maka ojiji
Elisabetta Franchi jaket ala
Ngwakọta nke mkpụrụ ndụ
Udo ndi nwanyi di ime
Table teepu maka ime ụlọ
Fried dumplings - ihe kacha atọ ụtọ ntụziaka
Ụkpụrụ na omenala ndị Russia
Ejiri ejiji maka afọ 2014
Kedu condom na otu esi ahọrọ oke nha?
Hernia nke ọkpụkpụ na - ahụ - mgbaàmà
Ejiri Caitlin Jenner kwadoro ihe ngosi nke egwuregwu
Uwe ihe mkpuchi
Ọchịchị Mgbụsị akwụkwọ 2014
Willow Smith meriri ụlọ ejiji Chanel
Kedu ka esi esi mee ka a tojete maka ite na oven?
Kedu ihe m ga-esi esi nri na pastọ?
Onyinye oghere ọcha - ihe nghota kwekọrọ na ime ụlọ
Zipu zucchini na anụ